Sidee loo soo celiyaa astaamaha iPhone? | Wararka IPhone
Dhowr sano ka hor, markii ay hawlwadeenada kaabaya boosteejooyinka, dhammaadka-hoose iyo hoose-ba, si ay u soo jiitaan tiro badan oo macaamiil ah, dadka isticmaala waxay la kulmeen dhibaatada codsiyada asalka ah ee wadaha, codsiyada aan weligood laga furi karin qaab fudud, tan iyo waxay u baahdeen aqoon badan.
Nasiib wanaag, Spain iyo dalal kale oo badan, kama aanan helin dhibaatada bloatware-ka IPhone-ka, ugu yaraan dhinacyada saddexaad, maadaama Apple ay na siiso codsiyo taxane ah oo qaar badan oo naga mid ahi aysan waligood isticmaalin oo mar walba ku dhammaada galka la tuuray , Faa'iido la'aan iyo wax kastoo aan dooneyno inaan ugu yeerno. Mararka qaar galkaas way ka baaba'aan sida barnaamijyada qaar oo aanan meelna ka heli karin. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, markaa waanu ku tusi doonaa sida loo soo ceshado astaamaha iyo barnaamijyada nidaamka ee la tirtiray mise waa la waayey.
Casharradan fudud ayaa inaga saari kara dhibaatada haddii aan beddelno astaamaha codsiyada iPhone-ka oo aynaan garanaynin sida kuwii hore loo soo celiyo.
Jidka horay loo maro waa mid aad u fudud:
1 Sidee looga soo kabtaa astaantii iPhone tirtiray
2 Sidee looga soo kabanayaa barnaamijyada la tirtiray ee ku saabsan macruufka
3 Haddii terminalkeennu uu leeyahay JAILBREAK
Sidee looga soo kabtaa astaantii iPhone tirtiray
Waxay kuxirantahay nooca iOS ee laga heli karo bartaada, waxay u egtahay in xulashooyinka menu-yada ay ka duwan yihiin kuwa ka muuqda sawirkan
Haddii qalabkeenu bilaabay inuu joojiyo muujinta muuqaalka qaar ka mid ah astaamaha nidaamka, ama aan dooneyno inaan ka takhalusno dhammaan u-habeynta aan ku sameynay goobteena adigoo isticmaalaya JAILBREAK, marwalba waan isticmaali karnaa arjiga aan ku sameynay, had iyo jeer iyo markuu na siiyo ikhtiyaarka ah in dib loogu noqdo isbeddelada.
Haddii kale, mahadsanid tirada tirada badan ee ikhtiyaarrada ah ee macruufka naga dhigayo annaga, waxaan dib u soo celin karnaa astaanta dhammaan codsiyada aan ku rakibnay iPhone ama iPad-ka nidaamka. Ku soo qaado astaanta dalabka waa inaan fulino talaabooyinka soo socda:
Gudaha goobaha, dhagsii General.
Kadibna waan cadaadinnaa General waan tagnaa Dib u dejinta.
Ikhtiyaariyada kala duwan ee ay bixiso menu-kan, waa inaan gujinnaa Dib u bilow shaashadda guriga.
Si loo dhammaystiro hawsha, qalabka ayaa dib u bilaabi doona inaad awoodo inaad isbedelada sameyso. Marka qalabka dib loo furo uu dhammeeyo, astaamaha markii horaba madhan ama aan toos loo soo bandhigin, ayaa markale lagu heli doonaa astaanta caadiga ah.
Liiskan waxaad sidoo kale ku leedahay ikhtiyaarro dib u soo celin ah oo iPhone ah oo aan fiicnayn in la ogaado inay jiraan.
Sidee looga soo kabanayaa barnaamijyada la tirtiray ee ku saabsan macruufka
Markii la sii daayay iOS 12, Apple wuxuu ku daray muuqaal cusub oo ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan tirtirno dhammaan codsiyadaas hooyo ee aanan qorsheyneynin inaan adeegsannoSababtoo ah ujeeddo nooma laha anaga ama sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan adeegsanno beddelaad leh hawlo badan.
In kasta oo waxa caadiga ah iyo waxa ugu caamsan ay tahay in la isugu geeyo codsiyada aan waxtarka lahayn ee nidaamka galka, haddii ay dhacdo inaan u baahanahay mar uun, waxay u badan tahay in haddii aaladda qalabkaagu had iyo jeer hooseeyo, aad go'aansatay ka tirtir qalabkaaga, mahadsanid shaqadan ay Apple soo bandhigtay.
Markaan sii wadno inaan tirtirno codsi hooyo, runtii waa aan gebi ahaanba laga tirtirin qalabkaTaabadalkeed, way ka qarsoon tahay aragtida isticmaalaha waxayna yareynaysaa cabirkeeda waxa kaliya ee lagama maarmaanka u ah. Sababta ayaa ah in dhammaan codsiyada macruufka ah ee macruufka ah, heer aad u weyn ama ka yar, ay ku dhexjiraan waxyaabo kala duwan oo nidaamka ah, sidaa darteed ka saarista arjiga waxay burburin kartaa xasilloonidiisa.
Haddii aan dooneyno inaan adeegsanno mid ka mid ah codsiyada hooyo ee aan horay u tirtirnay, waa inaan iska isticmaalnaa tag dukaanka arjiga ee Apple oo raadi magaca arjiga. In kasta oo ay u muuqato wax fudud, haddana waxay u badan tahay in dadka isticmaala qaarkood aysan si cad u arkin, sidaas darteed waxaan ku sharraxeynaa tusaale wax ku ool ah, oo tirtiraya dalabka Xisaabiyaha.
Markaanu tirtirno arjiga, waxaan fureynaa App Store oo aan tagnaa goobta raadinta.
Goobta raadinta, waxaan ku qoreynaa magaca arjiga aan rabno inaan soo celino. Waa inaan ogaanno, haa ama haa, magaca gaarka ah ee arjiga in aan dooneyno inaan dib u rakibno.
Natiijada ugu horreysa ee had iyo jeer u muuqata iyadoo la raacayo shuruudaha raadinta, xaaladdan Xisaabiyaha, nWaxay ku tusi doontaa dalabkii hooyo ee aan tirtirnay.
Sideen ku hubnaa inay tahay? Aad ufudud, maxaa yeelay halkii aad ka muujin lahayd Hel, astaanta daruurta ayaa hoos loo soo bandhigaa, taas oo ka dhigan in aan horay u soo iibsannay ama aan ku soo dejisannay arjiga qalabkan ama qalab kale. Si aan mar labaad u soo dejisanno, waa inaan ku riixnaa astaanta daruurta fallaarta hoose.
Intaa waxaa dheer, by hadaanan hubin, dhagsii arjiga si aad u hubiso haddii soo-saaraha barnaamijku uu yahay Apple laftiisa. Magaca abuuraha arjiga ayaa lagu soo bandhigay wax ka hooseeya magaca dalabka, oo kiiskan uu yahay Apple.
Haddii terminalkeennu uu leeyahay JAILBREAK
In kasta oo xaqiiqda ah in JAILBREAK uu hoos u dhacay saddexdii sano ee la soo dhaafay, maxaa yeelay Apple waxay soo guurisay inta badan astaamihii la heli karay Iyada oo loo marayo habkan lagu furayo iPhone-ka, adeegsadayaal badan ayaa sii wadaya isticmaalkeeda, si ay ugu raaxaystaan ​​shaqooyinka qaarkood ee aan wali la helin iyo sidoo kale muuqaalka yar ee mustaqbalka.
Mid ka mid ah wax ka beddelka ay adeegsadayaal badani isticmaalaan iyo mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sii socoshada jebinta, waxaan u aragnaa inay awood u leedahay inay wax ka beddesho astaamaha codsiyada nidaamka, iyo sidoo kale kuwa kale ee aan awoodno inaan rakibno. Haddii aad ka mid tahay isticmaale noocan ah oo astaan ​​la waayey, lagu muujiyey caddaan ama la waayey, markaa waan ku tusi doonaa sida loo soo celiyo astaanta iPhone.
Jailbreak waa geedi socod faragelin ah, tan iyo waxay u oggolaaneysaa marin u helidda asalka nidaamkaSidaa awgeed, noocyada wax ka beddelka ayaa la samayn karaa, taas oo mararka qaarkood sababi karta in qalabkeennu bilaabo inuu muujiyo cillad.
Cilad-darradan ayaa mararka qaarkood aad u muuqata marka aan rakibno isbeddel taas aan la jaan qaadi karin macruufka iyo nooca Cydia in aan rakibnay, marka waa inaan aad uga taxaddarnaa markaan rakibineyno codsi kasta oo noocan ah, maxaa yeelay waxay burburin kartaa JAILBREAK qalabkeenna.
Casharkani wuxuu noqon karaa mid fudud laakiin ma caawinayso inaad wax yar ka ogaato wax ku saabsan xulashooyinka iPhone-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sidee loo soo celiyaa astaamaha iPhone?
Waxaan raadinayaa sida aan ugala soo bixi karo dulucda shaashadda shaashadda ee 3G iPhone 8G bog bilaash ah maxaa yeelay waan kala soo bixi karaa kumbuyuutarka kumana wareejin karo taleefanka, fadlan, haddii qof uu leeyahay aqoon uu ku sameeyo, ku soo dir e-maylkayga air_jose@yahoo.com sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah maxaa yeelay waxaan rabaa in aan ku dhajiyo iphone-kayga
Jawaab Jose Cantellops
Waxyaabaha ayaa ah, Xisaabiyaha, compass, iyo astaamaha rikoodhka codka ayaa lumay kumana soo celin karo shaashadda guriga. Si aan u arko waxaan laba jeer gujiyaa badhanka hoose oo dhammaan codsiyada ayaa muuqda oo halkaas ayaan ka xushaa markaan u baahdo. Iyada oo khiyaanada kor ku xusan wax dib u soo celin ahi aysan shaqeyn. Mahadsanid
Jawaab Bartolome Queteba
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhacay aniga sidoo kale, ma waxaa u xirnaa JAILBREAK?
Ku jawaab flavio
Aad ayey u fiicantahay wax badan ayey i caawisay
Haye, waxaan sameeyay waxa kor ku xusan, wayna shaqeysay, laakiin mahelayo astaanta saacadda, oo aan dhowr jeer u isticmaalo saacadda alaarmiga, waxaan haystaa Iphon 4 (kahor S), fadlan, qof wuxuu ii sheegayaa «waddada»
Ku jawaab Juan de Lomas de zamora
Waxaan waayey astaanta SETTINGS
Ma heli karo astaamaha dejimaha ... sidee baan dib ugu soo ceshan karaa?
Waxaan cusbooneysiiyay iphonekeyga oo astaamihii nalka ayaa la waayey (si toosh ahaan loogu isticmaalo laambad ama wax la mid ah)… Sidee ku helaa
RAAXAD, WAAD MAHADSAN TAHAY. Faa'iido leh markaad rakibineyso gridlock for iwidges ee macruufka 7.0.4. Mar aan u maleynayo inaan xitaa ku qasbanahay inaan dib u soo celiyo iyo talaabooyinkan fudud laakiin waxtar leh waa la xaliyay.
Aad hadda dijo
Wanaagsan qoraalka ayaa wax badan iga caawiyay
Ku jawaab muyactual
Mudanayaal, waxaan furay IPhone-kayga 4, waxaan dul dhigay cufan Telefónica ah oo astaamaha xiriirada ayaa laga waayey shaashadii asalka ahayd, sida la soo jeediyey, waxaan raacay hanaankii dib loogu dhigay shaashadda guriga waxna ma dhacaan, waxaad siin kartaa beddelaad kale , Jawaabtaada waan sugayaa.
Tirtir astaanta dejintyadayda, sideen ku soo ceshaa?
Way ii shaqeysay Mahadsanid jacayl
Ku jawaab Cinthia
Waxaan lumiyay astaanta 1Password ee ku taal iPnone 6 waana soo ceshay anigoo gebi ahaanba xidhay isla markaana dib u bilaabay. Waxay iigu muuqatay sidii cusub shaashadii ugu dambeysay.
Dejinta dejimaha Yonle du waxaanan lumiyay dhammaan astaamaha, fadlan i caawi, kaliya waxaan helayaa xulashada luqadaha
Waan tirtiray astaanta whatsapp-ka ee iphon 3, mana garanayo sida loo soo ceshado, gacanta i sii, aaladda, iyada oo aan noqon qayladii ugu dambeysay, wali si fiican ayey u shaqeysaa.
Ku jawaab suso
Sideen ku soo ceshan karaa astaanta boostada ee iPhone 6 oo lagu daray
Jawaab Jorge Leon
Waxaan sidoo kale lumiyay astaanta boostada, waxaan ka raadiyay siir waxaan galay koontadayda laakiin waxay sheegaysaa inay horey u jirtay, ma aqaano sida loo saxo.
Ku jawaab lusha
Waxaan si qalad ah uga saaray astaanta soo dejinta muusikada iphone-kayga. Waxaan soo celiyey astaamihii shaashadda mana soo baxayaan, sideen ku soo ceshan karaa? Aad baad u mahadsantahay.
Waan tirtiray astaanta xusuusinta, sideen ku soo ceshan karaa? Mahadsanid
Waxaan tirtiray astaanta xusuusta oo waxaan rabaa inaan ka soo kabto
Aad baad u mahadsan tahay, macluumaadkaagu wuxuu iga caawiyey inaan dib u helo qoraaladayda tan iyo markii aan ka tirtiray barnaamijka iphone-kayga.
Ku jawaab Reyna Divva
Call of Duty Mobile beta ayaa bilaabmaya usbuuca dambe